वैशाखमा सक्नेगरी रानीपोखरीको पुनर्निर्माण हुँदै
काठमाडौं । आगामी वैशाखसम्ममा सक्नेगरी ऐतिहासिक रानीपोखरीको पुनर्निर्माण भइरहेको छ । अहिले पोखरीमा कालो माटो लगाउने काम, पर्खाल निर्माण र बीच भागमा रहेको बालगोपालेश्वर मन्दिर पुनर्निर्माण भइरहेको छ ।
विसं २०७२ वैशाख १२ गते गएको भूकम्पले पूर्णरूपमा क्षति पुर्‍याएको रानीपोखरी र बालगोपालेश्वर मन्दिर पुनर्निर्माणको काममा ३ वर्ष ढिलाइ भएपछि पछिल्लो समय राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जिम्मा लिएको हो । निर्धारित समयमै सक्नेगरी कामले गति लिएको प्रधिकरणको दाबी छ । पुसको अन्तिम सातासम्ममा पर्खाल लगाउने र पोखरीमा कालो माटो राख्ने कामले पूर्णता पाउने प्राधिकरणका सम्पदा विज्ञ राजुमान मानन्धरले बताए ।
यसैगरी बालगोपालश्वर मन्दिरको पुनर्निर्माणको कामसमेत तीव्ररूपमा भइरहेको छ । मन्दिरको निर्माणको काम अहिले २० प्रतिशत सकिएको छ । हाल मन्दिरमा काठको काम भइरहेको छ । पर्खालको काम ८५ प्रतिशत सकिएको छ भने पोखरीको काम ४० प्रतिशत सकिएको मानन्धरले बताए । ‘वैशाखसम्ममा नागरिकले पुरानै शौलीको रानीपोखरी देख्न पाउनेछन्,’ उनले भने ।
शुरुआतमा काठमाडौं महानगरपालिले पुनर्निर्माण गर्ने भनिए पनि कहिले पुरातŒव विभागसँग त कहिले कामपामा नै आन्तरिक कुरा नमिल्दा ३ वर्षसम्म काममा ढिलाइ भएको हो । मन्त्रिपरिषद्को गत माघ १४ को बैठकले रानीपोखरी र बालगोपालेश्वर मन्दिरलगायत सो क्षेत्रमा रहेका पुराताŒिवक संरचनाको पुनर्निर्माण गर्नेगरी प्राधिकरणलाई जिम्मेवारी दिएपछि निर्माणको काम अघि बढेको हो । मन्दिर पुरानै शैली (ग्रन्थकुट÷शिखर)मा पुनर्निर्माण गर्न गत असार २४ गते राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । १० महीनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी प्राधिकरणले निर्माण कम्पनी सीए र तुलसी कन्स्ट्रक्शन जेभीसँग सम्झौता गरेको छ ।
भूकम्प गएकै वर्ष माघ २ गते राष्ट्रिय भूकम्प दिवसका अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भूकम्पले क्षति पु¥याएको सम्पदा पुनर्निर्माणको शुरुआत रानीपोखरीबाटै गर्नुभएको थियो । रानीपोखरी पुनर्निर्माणका लागि प्राधिकरणले उपभोक्ता समितिमार्फत रू. ९ करोड ९७ लाखमा बजेट विनियोजन गरेको छ । पोखरी र मन्दिर निर्माणका लागि प्राधिकरणले रू. २५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । मन्दिरको उचाइ ५३ फिट हुनेछ । रासस